Jamaahiirta Kubadda Cagta Oo Soo Doortay 30kii Ciyaartoy Ee Abid Ugu Wanaagsanaa Laagga Xorta Ah - Gool24.Net
Jamaahiirta Kubadda Cagta Oo Soo Doortay 30kii Ciyaartoy Ee Abid Ugu Wanaagsanaa Laagga Xorta Ah
Laacibkii hore ee xulka qaranka Brazil iyo kooxda Lyon ee Juninho Pernambucano ayaa dhinac iskaga leexiyey ciyaaryahannadii ku haystay laagga xorta ah, waxaana booskiisa u go’aamiyey jamaahiirta kubadda cagta oo u doortay xiddigii ugu fiicnaa toogashada goolka ee kubbadaha xorta ah.
45 jirkan reer Brazil ayaa layaab ku ahaa laagga xorta ah oo uu ka dhalin jiray masaafo fog iyo mid dhow intaba, waxaana uu kooxdiisii Lyon guulaha ugu badan kusoo siiyey kubbadihii gantaalka ahee uu shabaqa ku hubsan jiray iyadoo ciyaartoyda isku-dhigayana ay wadne xanuun ka qaadi jireen baqashadiisa.
Goolhayeyaasha ayaa ku dhibaatoon jiray sidii ay ugu maare heli lahaayeen kubbadaha uu soo gano Juninho Pernambucano, waxaana la xasuusan yahay sidii uu Real Madrid sannadaha badan ugaga reebay tartanka Champions League.
Taageereyaasha kubadda cagta oo afti laga qaaday ayaa Juninho ka dhigay ciyaartoyga koowaad ee taariikhda kubadda cagta ugu wanaagsanaa kubbadaha laagga xorta ah, waxaana kaalinta labaad u degay xiddigii xulka qaranka England ee David Beckham oo waqtiyadii uu waddankiisa, Manchester United, Real Madrid, AC Milan iyo PSG uu ku sugnaa dhaliyey kubbado qurux badan oo xor ahaa.
Cristiano Ronaldo ayaa kaalinta saddexaad kusoo baxay, waxaana afraad noqday Diego Maradona halka uu Roberto Carlos soo xidhiidhsaday shanaad.
Sinisa Mihajlovic oo layaab ku ahaa kubbadaha noocan ah, isla markaana ay taariikhda ugu jiraan goolal badan oo uu libinta ugu horseeday naadiyadii uu u ciyaaray ayaa lixaad soo galay, waxaana ka horreeyaa Ronaldinho, Steven Gerard, Lionel Messi iyo Andrea Pirlo oo kusii xiga.
Halkan kaga bogo 30ka ciyaartoy ee ugu fiicnaa laagga xorta ah ee ay jamaahiirtu soo doorteen:
Abdiwaasac Qorshe says:
Legend always Legend.